Ihe kacha ụzọ Zọpụta Pictures si iMessage ka a Computer g
Enwere m ike na-azọpụta photos na iMessage na m iPhone m kọmputa?
Achọrọ m na-azọpụta photos na iMessages na m iPhone na kọmputa. Amaara m na m nwere ike ịzọpụta photos na m iPhone na mgbe nyefee ha na kọmputa. Ọ bụ obere manụ, n'ihi na m nwere nza nke photos na iMessage. Olee otú m nwere na-azọpụta foto niile m iPhone iMessage na kọmputa?
Azịza ya bụ ee. Ị nwere ike na-azọpụta iMessage foto si iPhone na kọmputa, ma mkpa ka ị na-arịọ maka enyemaka si a-atọ ndị ọzọ omume, nke na-ahapụ gị kpọmkwem iṅomi gị iPhone ịchọta data na ya na-enye gị ohere chekwaa ha na kọmputa. Ọ bụrụ na ị enweghị echiche banyere ihe omume, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac). Ma nke software ike gị kpọmkwem ike iṅomi ẹdude iMessage on iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, gụnyere Mgbakwụnye ka foto, videos na ọdịyo.
Ugbu a, ka na-ele otú ịzọpụta foto site na iMessage on Windows. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị ka nwere ike iso ụzọ n'okpuru mepụta ọrụ. Ọ bụ nnọọ yiri.
Iji Windows version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị ga-esi dị iche iche isi window. Mgbe ihe omume ahụ na-amata gị iPhone, ị ga-enweta ya dị ka nke a:
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, ị nwere ike nweta n'ime elu mode site na ịpị bọtịnụ na ala nke usoro si window.
Nzọụkwụ 2. amalite iṅomi gị iPhone
N'ihi na iPhone 5S / 5C / 5 / 4S ọrụ: Pịa "Malite iṅomi" button na isi window. Usoro ihe omume ga iṅomi gị iPhone na sekọnd ole na ole.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS ọrụ: Ị chọrọ ịbanye ngwaọrụ scanning mode tupu iṅomi. Nnọọ na-eso ụzọ n'okpuru:
Jide ngwaọrụ gị, na pịa "Malite" na window.
Hapụ Ike bọtịnụ mgbe 10 sekọnd agafeela, ma na-ejide Home button ọzọ 15 sekọnd. Mgbe na n'ime usoro ihe omume, ọ ga-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone-akpaghị aka na sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta foto site na iMessage na kọmputa
Ka a okwu nke eziokwu, ị nwere ike amalite ịhụchalụ hụrụ data n'oge iṅomi. Na Doppler N'ihi ya, niile hụrụ data na-categorized ọma. Ịchọta foto site na iMessage, ị nwere ike pịa "Ozi Mgbakwụnye", ebe ị pụrụ ịchọta niile Mgbakwụnye si MMS na iMessage. Ọzọkwa, ị nwere ike họrọ "Ozi" ka ịhụchalụ dum ederede na media ọdịnaya nke iMessage. Mgbe ahụ akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: The omume nwekwara hụ na nso nso-ehichapụ iMessage, gụnyere Mgbakwụnye. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, ị pụrụ iji bọtịnụ n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
iPhone Security Issues unu ga-amata
Olee otú ele ehichapụ iMessage History na Windows / Mac OS X
> Resource> iPhone> Olee otú iji Zọpụta Pictures si iMessage ka ​​a Computer